Raspberry Pi OS Zvita 2020 inosvika neChromium 84 | Linux Vakapindwa muropa
Raspberry Pi OS Zvita 2020 inosvika neChromium 84, kuvandudzika kwekuwanika uye sarudzo nyowani dzemahara
Mushure mokunge kuvhura zhizha rino mune imwe yeanonyanya kuzivikanwa matsva aive kuunzwa kweLinux 5.4, isu tatova neshanduro nyowani ye Raspberry Pi OS. Kune vasina ruzivo kana avo vari kuverenga nezve ino inoshanda system kekutanga, yeuka kuti ndiyo yaimbozivikanwa saRaspbian, zita rakabva mukubatana mune rimwe chete izwi Raspberry, iyo kambani kambani, uye Debian, iyo inoshanda sisitimu mune iyo yakavakirwa.
Kubva pane zvatinoverenga mu kusunungura chinyorwaZvinotaridza kuti inouya isina nhau chaidzoidzo, kana iwo mafungiro ekuti mushandisi anowana anofarira Manjaro zvakanyanya muiyo KDE vhezheni ine Plasma inokwezva uye yakazara. Asi izvi hazvireve kuti hazviunze zvitsva, kutanga ne Chrome 84 iyo, pakati pezvimwe zvinhu, inovandudza mhando yevhidhiyo pane saiti seYouTube.
Chii chitsva mune yaDecember 2020 edition yeRaspberry Pi OS
Chromium 84, iyo inovandudza kutamba kwemavhidhiyo kubva kumasevhisi akadai seYouTube, Google Sangana, Microsoft Matimu kana Zoom.
Kubva ikozvino zvichienda mberi, Raspberry Pi OS inoshandura kushandisa PulseAudio seyero server.
Yakanangana nezvakataurwa pamusoro apa, pari zvino paine shanduko kune yakasarudzika sarudzo iyo yemenyu sarudzo inoonekwa pazasi pemaprofayera echishandiso.
Kunatsiridzwa paunenge uchibatanidza uye kugadzirisa maprinta, neCUPS uye system-config-printa yakaiswa nekutadza.
Tsigiro yaOrca, iyo inowanikwa screen screen, yakagadziridzwa mukushandisa senge kumisikidza uye kutaridzika. Uye zvakare, kurira kwemuverengi kwakagadziridzwa nekuda kwekuchinja kuPulseAudio.
Sarudzo dzakawedzerwa kune yekumisikidza chishandiso, senge Sisitimu tebhu kubva kwatinogona kumisikidza maLED anoonekwa pamakomputa senge Raspberry Pi 400.
Vashandisi vanofarira kuisa Raspberry Pi OS, vanogona kurodha pasi iyo mufananidzo mutsva kubva Iyi link. Vashandisi varipo vanogona kukwidziridzwa kubva kuhurongwa hwekushandisa nemirairo sudo apt yakazara-kusimudzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Raspberry Pi OS Zvita 2020 inosvika neChromium 84, kuvandudzika kwekuwanika uye sarudzo nyowani dzemahara
alberto colomo akadaro
Ndinovimba zvinhu hazviregi kushanda nekuda kweshanduko mukutonga kwakanaka.
Pindura kuna Alberto Colomo
Mesa 20.3.0 inosvika ine v3dv controller yeDPi 4 uye nezvimwe
Nei Kernel Panic ichiitika muLinux?